Al Shabaab loltoota Itoophiyaa 60 ajjeesuu beeksise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Al Shabaab loltoota Itoophiyaa 60 ajjeesuu beeksise
Al Shabaab loltoota Itoophiyaa 60 ajjeesuu beeksise
Gamtaan Afrikaa loltoota Al Shabaab 110 hujiin ala godhuu isaa dubbata.
Somaaliyatti gareen Al Shabaab haleellaa raawwateen loltoota Itoophiyaa naannoo Halgaanitti maandheffatan keessaa 60 ajjeesuu beeksise, akka gabaasa BBC’tti.
Humni Gamtaa Afrikaa Somaalee keessatti bu’uurefatte haleellaa Al Shabaabiin irratti baname ufirraa qolachuu isaa fi loltoota Al Shabaab 110 hujiin ala godhuu dubbata. Waa’ee hubaatii Al Shabaab isaan irraan gaye wanti dubbate hin jiru, garuu.
Jiraattonni naannoo Halgaan sagalee dhukaasaa yeroo dheeraadhaaf dhagayaa turuu isanii BBC’itti himaniiru.
Yeroo kanatti woraana Gamtaa Afrikaa biyyoota shan irraa walitti bayan 22,000 ta’antu Somaaliyaa keessa quphateera- isa Itoophiyaas dabalatee.
Baatii Amajjii keessas Al Shabaab tankaarfii wolfakkaataa fudhateen loltoota Keeniyaa 100 ajjeese jedhee ture. Mootummaan Keeniyaa loltoonni irraa du’uu amanus meeqa akka ta’an ifa godhuu hin barbaanne.
Previous articleMootummaan Suudaan baqattoota Oromoo fi Eertiraa humnaan biyyatti deebisutti jira, jedha HRW
Next articleMootummaan Itoophiyaa lubbuu Oromoo 400 ol galaafachuu isaa HRW addeesse